Jenezy 9 - Ny Baiboly
Jenezy toko 9
Fanavaozana ny fanekena - Faminaniana nataon'i Noe momba ny taranany.
1Dia nitso-drano an'i Noe sy ny zanany lahy Andriamanitra, ka nanao taminy hoe: Miteraha maro, mihabetsaha ary mamenoa ny tany. 2Hatahotra anareo sy himalo avokoa ny bibin'ny tany rehetra, ny vorona eny amin'ny habakabaka rehetra, ny zava-mihetsiketsika rehetra ambonin'ny tany, mbamin'ny hazandrano rehetra anaty ranomasina; efa natolotra eo an-tànanareo ireny. 3Ho fihinana ho anareo avokoa rahefa mety ho zava-mihetsiketsika sy manana aina; fa omeko anareo daholo izany rehetra izany, toy ny efa nanomezako anareo ny zava-maitso. 4Kanefa ny nofo aza haninareo miaraka amin'ny aina, izany hoe ny rany. 5Ary ny ranareo dia hasaiko hampamoaka noho ny ainareo, hampamoahiko izany avokoa ny biby rehetra; ny tànan'olombelona, ny tànan'olombelona izay mpirahalahy no hampamoahiko ny ain'ny olombelona. 6Ka na zovy na zovy handatsaka ran'olona, dia mba halatsak'olona koa ny rany, satria nataon'Andriamanitra mitovy tarehy aminy ny olombelona. 7Ka dia miteraha maro hianareo, mihabetsaha hianareo, mieleza eran'ny tany, ka mihabetsaha eny.
8Hoy koa Andriamanitra tamin'i Noe sy ny zanany niaraka taminy: 9Ary izaho kosa dia hanao fanekem-pihavanana aminareo sy amin'ny taranaka mandimby anareo, 10amin'ny zava-manana aina rehetra izay eo aminareo, na vorona, na biby fiompy, sy ny bibin'ny tany rehetra, hatramin'izay nivoaka avy tao an-tsambo fiara ka hatramin'ny biby rehetra ambonin'ny tany. 11Manao fanekem-pihavanana aminareo aho: tsy hisy levon'ny safo-drano intsony ny nofo rehetra, ary tsy hisy safo-drano handringana ny tany intsony. 12Dia hoy Andriamanitra: Ity no famantaran'ny fanekena nataoko ho amiko sy ho aminareo mbamin'ny zava-manana aina rehetra izay ao aminareo, amin'ny taranaka ho avy rehetra: 13Nataoko eo amin'ny rahona ny avako, ka ho tonga famantaran'ny fanekena amiko sy amin'ny tany. 14Ka rahefa hampiangona rahona ambonin'ny tany aho, dia hiseho eo amin'ny rahona ny avana. 15Ka hotsarovako ny fanekena misy amiko sy aminareo mbamin'ny zava-manana aina rehetra, ny nofo rehetra, ka dia tsy hisy rano hanjary safo-drano mandringana ny nofo rehetra intsony. 16Ho eo amin'ny rahona ny avana, ka ny fijerena azy dia hahatsiarovako ny fanekena mandrakizay amin'Andriamanitra sy amin'ny zava-manana aina rehetra, ny nofo rehetra, ambonin'ny tany. 17Ary hoy Andriamanitra tamin'i Noe: Inona àry no famantaran'ny fanekena naoriko amiko sy amin'ny nofo rehetra ambonin'ny tany.
18Ny zanak'i Noe nivoaka tao an-tsambo fiara dia Sema sy Kama ary Jafeta; ary Kama no rain'i Kanaana. 19Izy telo lahy ireo no zanak'i Noe, ary avy amin'izy ireo ny olo-monina amin'ny tany rehetra.
20Mpiasa tany Noe, ka nanomboka namboly voaloboka izy. 21Nony nisotro divay dia mamo sy niboridana nanary lamba tao an-dainy izy. 22Nahita ny fitanjahan-drainy Kama, rain'i Kanaana, ka lasa nivoaka nilaza izany tamin'izy roa lahy rahalahiny. 23Fa noraisin'i Sema sy Jafeta kosa ny lamba, nasampiny tamin'ny sorony, dia nanao dia mianotra izy, ka nandrakotra ny fitanjahan-drainy. 24Niamboho ny tavan'izy ireo, ka tsy nahita izay fitanjahan-drainy. Nony nahatsiaro tamin'ny hamamoany Noe dia nahare izay nataon-janany farahaly taminy, 25ka hoy izy: Ho voaozona anie Kanaana, Ho andevon'ny andevo izy, amin'ny rahalahiny.
26Hoy indray izy: Isaorana anie Iaveh Andriamanitr'i Sema, Ary aoka ho andevony Kanaana. 27Hataon'Andriamanitra malalaka anie Jafeta. Aoka izy honina ao an-dain'i Sema. Ary aoka ho andevony Kanaana.
28Mbola velona dimam-polo sy telon-jato taona Noe taorian'ny safo-drano. 29Ary dimam-polo sy sivin-jato taona ny andro rehetra niainan'i Noe, dia maty izy. >
Powered by CI-CMS Version 2.0.0.0 | Page rendered in 0.0988 seconds